Dawladda Jabuuti oo qaybtii 1-aad ee Ciidammada ay Soomaaliya u dirayso gaadhsiisay Muqdisho | Berberanews.com
Home WARARKA Dawladda Jabuuti oo qaybtii 1-aad ee Ciidammada ay Soomaaliya u dirayso gaadhsiisay...
Dawladda Jabuuti oo qaybtii 1-aad ee Ciidammada ay Soomaaliya u dirayso gaadhsiisay Muqdisho
Muqdisho-(Berberanews)- Laba boqol oo Askari oo ka mid ah Ciidammo dawladda Jabuuti ugu talagashay inay u dirto Soomaaliya, isla markaana ay qayb ka noqdaan kuwa Midawga Afrika (AMISOM) ka jooga magaalada Muqdisho.
Diyaarad sidday 200 Askari oo ka tirsan Ciidamada dalka Jabuuti ee qaybta ka noqonaya AMISOM ayaa maanta ka degtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, iyadoo ammaanka garoonka diyaaradaha aad loo adkeeyay.Ciidamada AMISOM ee ka socda dalalka Uganda iyo Burundi ayaa la arkayay iyagoo dhaqdhaqaaqyo lagu adkeynayo ammaanka ka sameynaya daafaha Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha, waxaana qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Muqdisho lagu xiray calanka Jabuuti.
Dowladda Jabuuti ayaa waxay noqonaysaa dowladdiis saddexaad oo ciidammo ugu yaboohda howlgalka AMISOM oo hoostaga ururka Midowga Afrika, iyadoo ciidamadan ay qayb ka noqonayaa kuwa Uganda iyo Burundi oo dowladda ka taageera dagaallada lagula jiro Al-shabaab.
Waxaa hoggaaminayay ciidamadan abaanduulaha ciidamada dalka Jabuuti, Jen. Sakariye Sheekh Ibraahim, iyadoo horraantii toddobaadkan Muqdisho ku yimid booqasho, lana kulmay madaxda dowladda KMG ah ee Soomaaliya oo uu kala hadlay howlgalka ciidamada Jabuuti ee ka mid noqonaya AMISOM.
Ciidamada Jabuuti ee gaadhay Muqdisho ayaa lagu xareeyay Xerada Xalane oo ah taliska guud ee ciidammada AMISOM ay deggan yihiin ee Muqdisho, iyadoo aan la ogeyn xilliga ay howlgalkooda billaabayaan iyo xilliga lasoo dhameystirayo tirada ciidamadan oo ah 850- Askari oo Jabuuti ku ballan-qaadday inay Soomaaliya u dirayso.
Al-shabaab ayaa horray uga digtay inay dowladda Jabuuti ka mid noqoto ciidamada AMISOM ee ka socda Midowga Afrika, kuwaasoo ay sheegeen inay kula jiraan dagaal, haddii kalena ay ciidamadooda u laynayaan sida ay u laayeen ciidamada Burundi iyo kuwa Uganda.
Previous articleWefti ka socda Xukuumadda Somaliland oo markii ugu horreysay Safar ugu kicitimay dalka Masar
Next articleJamaal Cali Xuseen oo shaaciyey inuu Madaxweyne u sharraxan yahay iyo Xisbiga uu ka dhex-tartamayo, si weyna loogu soo dhaweeyey Hargeysa